विशेष Archives ~ Page2of 33 ~ Banking Khabar
विकास बैंकहरुले पनि देशैभरी शाखा फैलाउँदै
सुष्मा थापा/बैंकिङ खबर । शाखा विस्तारमा वाणिज्य बैंकहरु मात्रै नभएर विकास बैंकहरु पनि आक्रामक तवरले लागी परेका छन् । सबै स्थानीय तहमा बैंक पुर्याउने सरकारी योजनालाई विकास बैंकहरुले पनि साथ दिइरहेका छन् । खासगरी, राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंकहरुले शाखा सञ्जाल …
सुष्मा थापा, बैंकिङ खबर । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको पुँजीवृद्धिका लागि तोकिएको समयावधि सकिन अब एक महिना मात्रै बाँकी छ । पुस मसान्तसम्ममा क, ख र ग वर्गका बैंकहरुले तोकिएको चुक्तापुँजी पुर्याइसक्नुपर्ने हुन्छ । केही बैंकहरुले सोबमोजिम चुक्तापुँजी पुर्याइसकेका छन् …
सेयरमा लगानीको ठूलो अवसर : २३ कम्पनीको साधारण सेयर खुल्दै
बैंकिङ खबर । सेयरमा लगानी गर्न चाहनेहरुका लागि ठूलो अवसर आउने भएको छ । यतिबेला, तीन वटा कम्पनीले साधारण सेयर निष्काशनका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति पाइसकेका छन् भने २० वटा कम्पनी पाइपलाइनमा छन् । साञ्जेनको आइपिओलाई स्वीकृति साञ्जेन जलविद्युत …
शाखा विस्तारमा आक्रामक हुँदै बैंकहरु : कसको शाखा कति ?
रुपा कोइराला/बैंकिङ खबर । सबै स्थानीय तहमा बैंक शाखा पुर्याउने नीति अनुरुप बैंकहरु शाखा विस्तारमा आक्रामक तवरले लागीपरेका छन् । स्टान्डर्ड चार्टर्ड बैंकबाहेक २७ वटै वाणिज्य बैंकहरु योजनाबमोजिम शाखा विस्तारमा जुटेका छन् । हाल कृषि विकास बैंकको शाखा संख्या सबैभन्दा …
पोखराले जन्माएका बैंकहरु, जो झाँगीदै छन् देशैभरी
रुपा कोइराला/बैंकिङ खबर । अहिले नेपालमा २८ वटा वाणिज्य बैंक, ४० वटा विकास बैंक, २८ वटा वित्त कम्पनीहरु, ५३ वटा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु संचालनमा रहेका छन् । जसमध्ये, २८ वटै वाणिज्य बैंकहरुको प्रधान कार्यालय राजधानी सहर काठमाडौँमा नै रहेको छ …
प्रदेश नम्बर २ मा बैंकिङ पहुँच झन् कम्जोर (सम्पूर्ण सूची सहित)
बैंकिङ खबर / संघीय संरचना अनुसार निर्माण भएको प्रदेश नम्बर २ मा आठ जिल्लाहरु छन् । यस प्रदेशका अधिकांश स्थानीय तह बैंकिङ पहुँच बाहिर रहेका छन् । सप्तरी ११ स्थानीय तहमा बैंक छैनन् सप्तरी जिल्लाका ११ स्थानीय तहमा हाल सम्म …
प्रदेश नम्बर १ : बैंकबाट बञ्चित ६८ स्थानीय तह, कुन जिल्लामा कति बैंक ? (सूचिसहित)
रुपा कोइराला / रोयल आचार्य, बैंकिङ खबर संघीय संरचनामा निर्माण गरिएका ७ प्रदेशका ७ सय ५३ स्थानीय तह मध्ये ५० प्रतिशत भन्दा बढी स्थानीय तहमा बैंकिङ पहुँच पुग्न सकेको छैन । बैंक शाखा नपुगेका ४ सय ११ स्थानीय तहमध्ये २ …
भारतका बैंकहरु समस्याग्रस्त, अधिकाँस बैंकको खराब कर्जा १२ प्रतिशत नाघ्यो
बैंकिङ खबर । पछिल्लो केही समयदेखि नै भारतका बैंकहरु खराब कर्जा वृद्धिको शिकार भइरहेका छन् । भारतीय बैंकहरुमा यतिबेला १५४ विलियन अमेरिकी डलर बराबरको खराब कर्जा रहेको तथ्यांक छ । भारतीय बैंकिङ प्रणालीमा २६ वटा पब्लिक बैंक, २५ वटा निजी …
अमेरीकामा बीटक्वाईनको खूल्ला कारोबार सुरु, सरकारले दियो कानूनी मान्यता
सुष्मा थापा/बैंकिङ खबर । अमेरिकाले विश्वकै महँगो भर्चुअल मुद्रा बिटक्वाइनको कारोबारलाई कानुनी मान्यता दिएको छ । यसै महिनाको अन्त्यतिरबाट अमेरिकाका दुई एक्सचेञ्जहरु सीएमई ग्रुप र सीबीओई ग्लोबल मार्केट एक्सचेञ्जले विटक्वाइनको कारोबार सुरु गर्ने भएका छन् । यससँगै अब लगानीकर्ताले बिटक्वाइनमा …
बैंक नहुँदाको सास्ती, सामाजिक सुरक्षा भत्ताकै समस्यामा नागरिकहरु
बैंकिङ खबर । सरकारले सामाजिक सुरक्षाभत्ता बैंक खातामार्फत उपलब्ध गराउन थालेपछि बैंक नभएका ठाउँका जेष्ठ नागरिकहरु समस्यामा परेका छन् । आफ्नै ठाउँमा बैंक नभएपछि उनीहरु भत्ता लिनका लागि कयौँ दिन धाएर सहर वा सदरमुकामसम्म पुग्नुपर्ने भएको छ । अधिकांश स्थानीय …